Agromart | Agricultural Marketplace Nepal धान खेती गर्ने तरिका – Agromart
Q 1. धानमा पात बेरुवा कीरा नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?
Q 2. धानको फड्के कीरालाइ रसायनिक तरिकाले ब्यवस्थापान कसरी गर्ने ?
Q 3. धानको फड्के कीरालाई जैबिक तरिकाले ब्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 4. धानमा गवारो कीराको ब्यवस्थापान कसरी गर्ने ?
Q 5. धानमा खैरा रोगको रोकथाम गर्न के गर्नुपर्ला ?
Q 6. धानमा खैरा रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ ?
Q 7. धानमा कालो पोके रोगको रोकथाम गर्न के गर्नुपर्ला ?
Q 8. धानमा कालो पोके रोग भनेको के हो ?
Q 9. धानमा फेद कुहिने रोगको रोकथाम के होला ?
Q 10. धानमा फेद कुहिने रोगको लक्षण के होला ?
Q 11. धानमा डढुवा रोगको ब्यवस्थापान कसरी गर्ने ?
Q 12. धान बाली काट्ने समय कसरी थाहा पाउने ?
Q 13. रसायनिक बिधिबाट झारपात नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
Q 14. धानमा झारपात नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
Q 15. धानको बीउ छर्ने र रोप्ने समय कहिले हो ?
Q 16. धानखेतमा पानीको मात्रा अवस्था अनुसार कसरी ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ?
Q 17. असिंचित क्षेत्रमा धानको लागि मल खाद कति आवश्यक पर्दछ ?
Q 18. सिंचित क्षेत्रमा धानको लागि मलखाद कति आवश्यक पर्दछ ?
Q 19. धानको बेर्ना रोपेपछि पानी धेरै दिन सम्म टिकाउन के गर्नुपर्ला ?
Q 20. धानको बेर्नाको उमेर कति हुनुपर्दछ ?
Q 21. धानको बीउ दर कति हो ?
Q 22. धानको बीउलाई के ले उपचार गर्नुपर्दछ ?
Q 23. धानको बीउको लागि बीउ छनौट कसरी गर्ने ?
Q 24. धान कति किसिमले लगाउन सकिन्छ ?
Q 25. धान खेतीको लागि उपयुक्त माटोको पि.एच. कति हो ?
Q 26. धान खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ ?
Q 27. बीउ उम्रनको लागि माटोमा न्युनतम तापक्रम कति आवश्यक हुन्छ ?
Q 28. नेपालको तराइ तथा भित्री मधेशको लागि उपयुक्त धानका बर्णशंकर जातहरु के के हुन् ?
Q 29. हाईब्रिड धानका जातहरु भन्नाले के बुझिन्छ ?
Q 30. हालै मध्य पहाड र तल्लो पहाडको लागि सिफारिश गरिएको जात के हो ?
Q 31. खुमल १० धानको जातको बिशेष गुणहरु के के छन् ?
Q 32. खुमल १० धानको जात कुन क्षेत्रको लागि सिफारिश गरिएको छ ?
Q 33. पोखरेली जेठोबुढो धानको जात कुन क्षेत्रको लागि सिफारिश गरिएको छ ?
Q 34. जुम्ला वा सो सरहको क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको धानका जातहरु के के छन् ?
Q 35. हर्दिनाथ १ धानको जात कस्तो बाली प्रणालीमा लगाउन सकिन्छ ?
Q 36. हर्दिनाथ १ धान कस्तो क्षेत्रको लागि सिफारिश गरिएको हो
Q 37. हर्दिनाथ १ धानको बिशेष गुणहरु के के छन् ?
Q 38. तराई क्षेत्रको लागि चैते धानको जातहरु के के छन् ?
Q 39. बाढी आउने वा पानी बढी हुने जग्गाको लागि धानको कुन कुन जात उपयुक्त हुन्छ ?
Q 40. तराईको लागि सुख्खा सहन सक्ने धानका जातहरु के के सिफारीश गरिएका छन् ?